HOOKARA HOONGAHAA, WAL GAHII WAL DHAHAA;(Walaloo) QIXXEESSAA LAMMII IRRAA | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
HOOKARA HOONGAHAA, WAL GAHII WAL DHAHAA;(Walaloo) QIXXEESSAA LAMMII IRRAA
November 19, 2016 OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.ORG	Leave a comment
Hookara Hongahaa, Wal gahii Wal dhahaa,
Shiraa fi daba malee, Maaltu keessaa baha.
Karoora diigamsaa, Adeemsa adawwii,
Afaan guutatanii, Yoo jedhan wal gahii,
Bitaa natti galee, Hubachuu barbaadee,
Obsee irra ciisee, Oolee bulee yaadee,
Wolaloo atamtu, Kurfaawee dhihaate?
Gammachu moo gaddaan, Walgahiin simate?
Abaarsa moo eebaan,Walgahin fudhate?(2)
Wal xiqqeessuun fayyaa? Hawaasni gabroome?
Kanatu na dhibee,Yaboo, Natti himaa mee,
Teessuma sanatti Ani baay’ee quurramee,
Hedduu jala ceeree, Qalbiin itti dhibamee,
Ijaarsa moo diiggaa? Mee maal haa jetnu mee?(2)
Baasa baasa Baasa baase, Dubbiin gadaa kanaa,
Takkayyuu hin argine, Teessuma akkanaa,
Nama qullaa yaa’u, Kan hin qabne kafana,
Raajii dur hin jirree, Isin maal jettan ree?
Abbootiin wal tajjii, Oromo mo, Tigre?
Farreen moo, basaasa? Kanaaf jedhee baasa.(2)
Gariin mirga soqaa, Gariin dhoqqee laaqaa,
Diina mirga goree, Saba malaan jeeqa,
Dhugaa lafatti gatee, Dhara wal gahiin dhaqa,
Qabsaawaa fakkaatee, Tottolfatee maqaa.2
Sabboonaa of tolchee, Bakkayyutti diddigaa,
Xurii namatti rigaa, Gandaan nama diiga.
Oromoo salphisuuf, Diinaaf ta’ee mirga.(2)
Eenyutu qopheesse? Wal tajjii wal qeeqaa?
Teessuma abaarsaa, Duraa duubni qaaqaa?
Walaloon waltajii, Hoongahootaa bante,
Hadhooftuun ajooftuun, Gootota abaarte,
Falmataa ceersitee, Qabsoo fanfansite,
Kan barreesse farraa, Dubbisaan gaararraa,
Bantuu yaa’ii gochuu, Duuba eenyutu jira?
Yaa ilmaan Oromoo, Farroota moo fira?(2)
Gariin fala jedhaa, An falfala jedhaa,
Gariin jara jedhaa, Gariin gara’a jedhaa,
Jaalattan koo fudhadhaa,
Jibbitan lakkisa, Ani dhara jedhaa.(2)
Qabsoo cidha seetee, Ceetee itti seentee,
A’achuu dadhabdee, Gantee keessaa dheettee,
Biyya irraa fagaattee, Biyya ormaatti ceetee,
Yoo huffee afuuftu, Gowwaan dhugaa seeha,
Qabsaawaadha jedhee, Horiin jala ceeha.(2)
Haasawa mi’oofti, Gantuun yoo dubbatu,
Hojiin hin mul’atu, Haasawa hin sakkabdu,
Duudaa gajafsiifti, Waltajjii irratti baatu.
Kanatu na dhibee, Maal woyya yaa jamaa?
Waraaqaan ceerfamee, Booddessaan faarfamaa,
Qabsaawaan balfamee, Gantuun jaalatamaa,
Jagni abaaramee, Luyni eebbifamaa,
Duuba eessaa madde? Teessumni akkanaa?
Qabsaawaa xiqqeessee, Gatii dhoorgu gamna.(2)
Qabsaawaan akkamiin, Gantuun tuffatama?
Gantootaaf deeggarsi, Dachaadhaan kennama?
Harki sabboontotaa, Chachisee dhawama?(2)
Kana kan na dhibe, Obboleeyyan kiyya,
Hirriba na dhoorge, Halkanii fi guyyaa,
Kan quuqaa natti tahee, Na dhabsiise fayyaa,
Kunoo hin qulqulloofnee, Har’allee maal wayya?(2)
Jibbansa hurgufuun, Qalbii sabaa hatuun,
Diina dhinsa malee, Saba hin fayyaduu,
Olola farreeniif, Gurra hin kennina,
Qoree dhoqqee keessaa, Irra hin ijjatina,
Farreen diina caaluu, Itti of hin gatina,
Qeeqaan of irraa eegaa, Of hin dagatina.(2)
Dhara irraa hafaa, Dhugaa faana gora,
Firaa fi farra qabsoo, Sirritti addaan bara,
Wagguu dogongoruun, Nuuf haa gahaa hadaraa,
Cubbuu of irraa eegaa, Dhugaa faana baya,
Woca hin baay’isina, Wal jalaa dhagaya,
Nama walii galetu, Malaan tabba bayaa.(2)
Wal abaaruu dhiifnee, Sabaaf haa falmatnu,
Wal laaffisuu dhiifnee, Wal haa jabeessinu,
Fincila gabrummaa, Daran haa cimsinu,
Harqoota gabrummaa, Gmtaan haa cabsinuu,
Bilisoomnu malee, Nama dhugaa hin taanuu,
Walaboomnu malee,Dhugaa hin taanuu.(2)
Fooliin bilisummaa, Bakkayyuu urgahee,
Oromiyaa guutuu, Naannahee, wal gahee,
Jabaadhu qeerricha, Jabaadhu qeerrittii,
Qabsoo kee finiinsi, Bakkuma jirtutti,
Daaqxee hurgufamtee, Wayyaaneen ni kuftii,
Bilisummaan teenya, Jabaadhaa ni dhuftii,
Walabummaan teenya, Abdadhaa ni dhuftii,
Gargaarsa Rabbiitiin, Tigreen ni facaatii,
Gumaan goottan keenyaa, Dacha dachaan baatii,
Alaabaan ABO, Finfinnee hangaatii.
Inshaallahu abdadhaa, Yeroo gabaabdutti.(2)
Injifatnoon dachaan, Kan WBO keenyaati,
Injifatnoon dachaan, Kan Qeerroo keenyaati.
Injifatnoon dachaan, Kan ABO keenyaati,
Barreessee dhiheessaan, Qixxeessaa Lamiitii,
Hamma walitti deebinuu, Turaa nagayatti!
Previous PostPrevious PostNext PostHOOKARA HOONGAHAA, WAL GAHII WAL DHAHAA;(Walaloo) QIXXEESSAA LAMMII IRRAA